Njikwa ụgbọ elu na-atụ egwu. ọrụ nchịkwa zuru oke na Basel
Ụgbọ njem na Basel - njem nleta na Switzerland
Pụrụ iche - EuroAirport Basel Mulhouse Freiburg
Enwere ezigbo ihe mere eji eji ụgbọ elu na-enye Basel - ma buru ụzọ nweta ihe ọmụma banyere ọdụ ụgbọ elu anyị:
Ọdụ ụgbọ elu anyị dị na Basel abụghị nanị linchpin maka ọtụtụ ụgbọ elu gburugburu ụwa, mana nwekwara ọtụtụ atụmatụ dị ịtụnanya. Kemgbe 1987, ọdụ ụgbọ elu ahụ nyere aha mara mma "EuroAirport Basel Mulhouse Freiburg" - na ezi ihe kpatara ya, n'ihi na ebe a na Basel bụ ọdụ ụgbọ elu nke ụwa na-adabere n'ókèala nke ala abụọ. Switzerland na France na-arụkọ ụgbọ elu ọnụ. Mgbe Switzerland jikọsịrị 2009 na nkwekọrịta Schengen, ndị njem ugbu a aghaghị iji rụzigharịa arụmọrụ na ụzọ mgbagwoju anya. Na ebe ya na triangle ókè, Basel Airport dị oke mkpa maka ógbè Germany nke dị n'ebe ndịda-ọdịda anyanwụ - nke mere na ọ na-ebu isi "Freiburg" na ụfọdụ ndị nnọchianya si n'ebe ndịda Baden na-ewusi ndị isi nchịkwa ike.
Ihe iche iche nke nnyefe - Enweghị njikọ ụgbọ okporo ígwè
N'agbanyeghị nnukwu mba dị mkpa n'ụwa, ọ gaghị ekwe omume iji mezuo atụmatụ maka njikọ ụgbọ okporo ígwè na ikuku nke ọdụ ụgbọ elu Basel. Dịka onye njem ị ghaghị ịchọta ụzọ ọzọ na-abụghị nhọrọ kacha mma maka onye ọ bụla. Ndị njem achụmnta ego karịsịa anaghị achọ iji ụgbọ okporo ígwè na-ebufe iji banye ọdụ ụgbọ oloko kasị nso na France. Ọbụna maka ndị njem ezumike na sloputa anyị dị ski bụ mgbanwe site na ụgbọ elu na bọs wee jiri ụzọ ndị ọzọ na-ebuga n'ógbè ebe ezumike na-adịkarị ala.
Jiri nlezianya gaa njem ụgbọ elu Basel
Maka ihe ndị a, ọrụ nnyefe anyị emewo ka ọ bụrụ ọrụ nke ime ka ndị njem na ndị nleta gaa ebe ha na-aga n'ụzọ kachasị mma. Ọtụtụ mgbe njem ahụ na-amalite ọbụna na ọdụ ụgbọ elu Zurich. Karịsịa site n'ịnyefe ndị a, nchekwa, oge na, n'ezie, nkwekọrịta gị dị mkpa. Ndị njem anyị nwere ike na-atụ anya na limousine mmepụta nke German na mbụ na ndị ọkwọ ụgbọala anyị na-enyere anyị aka. Ma njem njem ezumike ma ọ bụ njem azụmahịa - ị nwere ike ịnye akwụkwọ ozi anyị na Basel mgbe ị na-eme njem gị n'ịntanetị ma na-enwe mmasị na njem na-enweghị nchekasị na nke dị jụụ, ma nwee obodo mara mma nke Switzerland.
K'anyị mara ihe anyị nwere ike imere gị!
Otu gị site na Bipute Ntọala Basel
Edere na: Airport Basel ọdụ ụgbọ Shuttle limousine ọrụ
taxi.flughafen Januar 8, 2017 Januar 8, 2017 ọdụ ụgbọ Shuttle Enweghị ihe ọ bụla
← Ọrụ Limousine na-enweghị ókèala
Ụgbọ njem ụgbọ mmiri maka Zurich na Basel →